VaMadhuku Vodaidzwa kuMatare neMhosva dza2004
Muzviitiko zvave kuonekwa nevamwe senzira yekuda kunyaradza vose vanofungidzirwa kuti vane maonero akasiyana neZanu PF, mapurisa muHarare neChipiri akapa masamanisi kuna sachigaro weNCA, Professor Lovemore Madhuku, vachinzi vaende kudare musi wa16 Kurume nemhosva dzavanonzi vakapara muna 2004 na2006.
Muna 2004 mapurisa anoti VaMadhuku vakaita musangano wkanga usina kupihwa mvumo nemapurisa, uye muna 2006, vanonzi vakazvidza mapurisa nekuita musangano wakanga warambidzwa.
NeChipiri chakare kuBulawayo, mumiriri weBulawayo Central mudare reparamende, uye vari nhengo yeMDC T, Amai Dorcas Sibanda, nevamwe vavo vashanu, vanonzi vakatorwa vakambochengetedzwa nemapurisa kwemaawa anodarika mashanu vachipomerwa mhosva yekuronga kuratidzira kwainzi kungangoitwa neChipiri munyika.
Ukuwo nhengo dzeWOZA neMOZA gumi neina dzakabviswa muhusungwa neChipiri manheru, uye vamwe vavo vanomwe vamiswa pamberi pematare edzimhosva muBulawayo neChitatu vachipomerwawo mhosva yekuronga kuratidzira.
Vanomwe ava vapihwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu pamunhu.
Mumiriri weNyanga North mudare reparamende, VaDouglas Mwonzora, nedzimwe nhengo dzebato ravo, vava nemasvondo matatu vari muhusungwa, vachipomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga kuManicaland.
Ukuwo mukuru weInternational Socialist Organization, VaMunyaradzi Gwisai, nevamwe vavo makumi mana, vari muhusungwa vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. VaGwisai nevamwe vavo vanoti vakatochwa vari mumaoko emapurisa, uye vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa.
Mutungamiri weMDC 99, VaJob Sikhala, avo vazopiwa mukana wekumiswa pamberi pedare uye kubvisiswa mari yechibatiso neChitatu, mumwe wevanhu vakasungwawo zvisina shumo.
VaMadhuku vaudza Studio7 kuti zviri kuitwa nemapurisa pamwe neZanuPF hazvisi kuzovatyisidzira kuti varambe vakanyarara.